बुवाको बजार किन्ने सपना – Dullu Khabar
बुवाको बजार किन्ने सपना
जीवन एक घुम्ती अनेक :
by बि जि ठकुरी
६ भाद्र २०७७, शनिबार ०९:४८
उकालीको चिप्लो बाटो । दुई वटै खुट्टामा लगाएको चप्पल चुट्यो । मीतसँग ऋण माग्न हिडेको मान्छे । बजारका साहुले के उधारो पत्याउथे र ! चिसो शीतमाथि नाङ्गो पैतलाले दिएको पीडाको अनुभव…
दैलेख जिल्लाको महाबु गाउँपालिका (साविक रानिवन गाविस)आसपासको क्षेत्रको ‘ठूलो घर’ । नामले मात्र ठूलो घर होइन । घर त्यो क्षेत्रकै ठूलो अर्थात पुरानो मोडलको लामो घर भएकोले ठूलो घर भनिएको हो । त्यतिमात्रै होइन परिवारको पहिचान पनि छुट्छै छ ।
पाँच जना दाजु–भाई तीन दिदि–बहिनी । आफु सहित तीन भाई विवाहित । गरिव परिवारको धेरै जनसंख्या । दुर्गम गाऊँ । छ महिना भारतमा पसिना नवगाए हातमुख जोड्न हम्मे हम्मे… । कथा मेरो बुबाको !
बुवाको–नाम धन शाही । यतिवेला वर्ष ७२ । आफुसहित पाँच भाई । तीन बहिनी । परिवारका सबै सदस्य ७० जना । ओहो ! कति भाग्मानी मेरो बुवा, अनि अभागी पनि त्यतिकै ।
त्यति ठूलो संख्यामा घरपरिवार पाल्नुपर्ने वाध्यता । परिवारको जिम्मेजारी सबै बुवाको काँधमा । जवानीका सारा वर्ष भारतमा मजदुरी गरेर विते । घरमा पालेका वस्तुभाउहरुको प्रयोग केवल बारीमा मलहाल्न र साउलाई न्युनतम मूल्यमा चित्त बुझाउन बाहेक अरु केही काम लागेन । त्यहि पनि सस्तो मूल्यमा ।
समयक्रम अनुसार वुबाको सोचमा परिवर्तन आयो । आफु नपढेपनि भाईलाई पढाएर जागिर खुवाउने सपना । त्यहि सपनालाई साकार बनाउन सुरुवात गर्नुभयो । माईलो बुवा र साईलो बुवालाई उमेर र अवस्थाले पढ्ने वातावरण मिलेन । उहाँहरुको विवाह पनि भईसकेको थियो । सानु अंकल अलि सानै हुनुहुन्थ्यो । त्यो समयमा बुबाको रोजाईमा पढाईको लागि काईलो अंकल नै पर्नु भयो ।
काइलो भाईलाई पढाउन बुबाले घर सल्लाह गर्नुभयो । पढाउने योजना त्यो समय त्यति सजिलो थिएन । कक्षा १ बाटनै सामुदायिक विद्यालय भएपनि शुल्क तिनुपर्ने । स्कुलमा पढाउने शिक्षकलाई पनि बिद्यार्थीहरुले तलव स्वरुप घरबाट पैशा हुनेले पैशा नहुनेले अनाज दिनुपर्ने । बुबाको जिद्धिले जसरी पनि काईलो अंकल स्कुल भर्ना हुनुभयो ।
बुवा भन्नुहुन्छ–‘आज–आज, भोली–भोली भन्दै दिनहरु बित्दै गए । कहिले भारत कहिले नेपाल गर्दै संघर्ष गर्दै काईलाको पढाई खर्चमा कमी हुन दिएन । उसको एस.एल.सी. परिक्षा दिने बेला भयो । एकातिर त्यो लेभलसम्म पुग्नुपनि सानो कुरा थिएन मेरो लागी भने ठूलो खुशीको बहार जस्तै थियो । त्यतिवेला एस.एल.सी. पास गर्ने व्यक्तिलाई जागिर पक्का जस्तै थियो ।’
तर अरु बर्ष हरुजस्तो यो वर्ष त्यति सहज स्थिति बनेन । अवसर र चुनौती दुबै खडा भयो । किनकी एस.एल.सी. परीक्षा केन्द्र घरदेखि धेरै टाढा पथ्र्यो । घरबाटै परीक्षा केन्द्र पुग्न सम्भवन थिएन । परीक्षा अवधिभर आवश्यकता अनुसारको खाना घरबाटै बोकेर व्यवस्था भयो ।
‘तर चिसो मौसम भएकोले लगाउने ज्याकेट र घर भाडा तीर्न चाहिने पैशा मसंग पनि थिएन । यो सबै खर्च जोड्दा जम्मा जम्मी १७० रुपैयाँ चाहिने थियो–’ बुवा भन्नुहुन्छ
घरमा एक रुपैयाँ छैन । बिक्र गर्न मिल्ने गाई–भैसी पनि दुहुनो थिएनन् । लिलामी मुल्यमा समेत बिक्री गर्छु भन्दापनि किन्ने कोही पाइएन । ‘छरछिमेक, गांउघरका मुखिया सबैसंग ऋण मागे तर कही कतैबाट पनि पाइएन ।’
बुवा भन्नुहुन्छ–‘कतै उपाए नभएपछि घरबाट मीतकहाँ गए । सानैमा भारतमा मजदुरी गर्दा भेट भएका एक बाउन थरका व्याक्तिसंग मितेरी लगाएको थिएँ ।’ मीतकहाँ जान घरबाट लगभग दिनभरिको बाटो हिड्न पथ्र्यो ।
‘भाई पढाएर जागिर खुवाउने सपना साकार पार्न बिहानै छिमेकीको घरबाट दुध मागेर खिरको कोसेली बोकेर मीतको घरतर्फ हिडेँ ।’
करिव एक घण्टा लाग्ने जंगलको उकालो बाटो । हिड्दा–हिड्दै खुट्टाको चप्पल चुडियो । चुटेको चप्पल फेरि गास्न पनि नमिल्ने थियो । ‘अहिलेको जस्ता चप्पल आउने भए त कम्तिमा आगोले डामेर भएनि जोड्ने थिए नी । त्यही पनि भएन ।’ बुवाले भन्नुभयो ।
‘धागोले अल्झाएर जसो–तसो खुट्टामा अड्निे बनाए । ५–१० मिनेट हिडेपछि । ढुंगामा लर्किएर अर्को खुटाको चप्पल पनि चुट्यो । बेस्सरी रिस उठ्यो ।’
पहिलोपटक मितको घर जान हिडेको मान्छे । त्यहीपनि पनि ऋण माग्न । त्यसैमाथि दुईवटै खुट्टाको चप्पल चुट्दा निकै पीडा भयो । माघको महिना । लेकाली ठाउँ । भुईभरि सीत परेर कठ्याग्रिने जाडो । ‘खाली खुट्टै हिँडेर भएपनि नजिकैको बजार पुगे । त्यहाँ पुराना साहुँ थिए । जहिलेसुकै तीनैका बाट सामान किन्थे ।’
चिनेका साहुभएपछि उधारो भएपनि चप्पल किन्ने आशमा हिडेको मान्छे । तर पसल त्यो दिन बन्द गरेर साहु सामान हाल्न अन्तै बजार गएका रहेछन् । बजारका अरु साहुसँग बुवाको चिनजान थिएन ।
‘तैपनि यताउताका अरु पसलेसँग उधारो मागे । तर दिएनन् । साझ मीतका बाट फर्किदा पैशा दिन्छु भन्दा पनि पत्याएनन् । पीडा मनभरि लिएर खाली खुट्टै उकालो लागे ।’
अनि त्यहिबेला अनेकौं कुराहरु मनभरि बहकिन थाले । ‘त्यतिवेलै मैले ठूलो योजना बनाए । यो बजार किन्ने । मसँग ४ बोरा पैशा होस् । पैशा बोक्ने भरिया लगाउथे र यिनिहरु साहुकहाँ जान्थे । सामानको मूल्यमा बार्गेनिङ्ग गर्थे र लास्टमा उनिहरुको व्यवहार अनुसार पसलको पुरै मूल्य तिरिदिन्थे ।’ बुवाको त्यतिवेलाको योजना सुनाउँदै भन्नुभयो –‘तेरो पुरै पसलको मूल्य कति ?’ साहुले रिसाउँदै भन्थ्यो होला–‘दम छ त सँग ल २० हजार ल्या । यो घरसहित पसल लैजा । जाबो १५ रुपैयाँको चप्पल किन्न नसक्नेले यति धेरै फुर्ति ।’
‘अनि मैले भरियालाई पैशाको बोरा खोल्न लगाएर २० हजार हातमा थमाईदिन्थे । र पुरै पसल किनेर बन्द गरेर हिड्थे । एउटा÷दुईटा पसलमात्र होइन पुरै बजार किनिदिन्थे ।’
त्यहि योजना बुन्दै उकालो हिडेको पत्तो भएन । ‘मीत घरमा मितिनी मात्रै थिइन् । मितिनीसँग परिचय भइपछि ढोकाभेट भयो । ‘घरबाट लिएको कोसेली दिए । मीत गोरु किन्न अर्का गाउँ गएका रहेछन् । भेट हुन पाएन । तरपनि मेरो समस्या मितिनीलाई सुनाए ।’
मागेको भन्दा ३० रुपैयाँ धेरै अर्थात दुई सय रुपैयाँ ऋण पाएपछि खुशीको सीमा रहेन । ‘पैशा थियो तर पनि चप्पल किनेन । ती साहुका रिसले ।’
बुवाको सोच अनुसारनै अंकलको परिक्षा सकियो । एस.एल.सी.को नतिजा प्रकाशित भयो, अंकल पास पनि हुनुभयो । त्यसको केही समयमै गाँउको स्कुलमा अस्थाइ शिक्षक नियुक्ति हुनुभयो । ‘त्यसपछि मेरा दिनमा फेरबदल आयो’ बुवाले भन्नुभयो ।
परिवारका सदस्यमध्ये एक जना शिक्षक भएपछि उहाँको प्रेरणाले अरु सबैजना शिक्षित बन्नतर्फ अग्रसर भए । जसको फलस्वरुप ५ बावुका १५ भाई छोरा हामी शिक्षित भयौं, बहिनीहरु पनि त्यसरी नै पढ्दै गए, गाँउमै शिक्षत परिवारको सूचीमा पहिलो बन्यो । अहिले परिवारभित्र मासिक ३० हजार भन्दा बढि आम्दानी गर्ने भाईहरु १३ जना छन् ।
यी सबै, बुवाको बजार किन्ने सपनाबाट पूरा भएको हो । घरको कार्यकारी अधिकार बुबामा निहित छ, खाने चुलो फरक भएपनि हरेक कार्य बुबाको निर्देशनमा हुन्छ ।
तर समय सधै आफ्नो पंक्षमा नहुदो रहेछ, उमेर र अबस्थासंगै बुवा बिरामी पर्नुभयो, हामीले तत्काल उपचारको लागि काठमाण्डौं स्थित बिरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा पु¥यायौ, हालको कोरोना भाईरसका कारण कठिन परिस्थिीतीका बाबजुत बुबाको उपचार सफल भयो ।
त्यो जमनामा बुवाको सानो एउटा बजार किन्ने सपना । जसको कारण हामीले थोरै समयमा संसार जितेको महसुस हुन्छ । हामी कोही कहिल्यै पनि बुवाको विचार भन्दा फरक भएनौ, हाम्रो लागी त्यही नै सब थोक हो ।
तर हामीलाई समयले धोका दिन शुरु गरिसकेको छ, अचानक ह्दयघातले सार्ईलो बुबाको निधन भयो, यतिखेर हाम्रो परिवारमा सनाटा छाइरहेको छ, बुबा दिन प्रतिदिन आफ्नो रोग र प्यारो भाईको शोकले बेचैन हुन थाल्नु भएको छ, फेरी दुःखको घडिमा केही साईलो बुवाको झल्कँे मेटाउने नंया आशाको किरणले यस धर्तिमा पाईला टेकेको छ ।
अन्त्यमा यो लेख मार्फत पुजनिय साईलो बुवाप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन । व्यक्त गर्दछु ।
(पुजनिय बुवा धन बहादुर शाहीबाट व्यक्त गरिएको वास्तविक कथा)
Tags: जीवन एक घुम्ती अनेक :